Ikhaya IZITOLO ZaseNingizimu AMERICA FOOTBALL Abadlali bebhola lase-Argentina Amaqiniso we-Giovani Lo Celso Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
I-LB iveza iNdaba ye-Football Genius eyaziwa ngegama elithi "UMonito“. Kungumfanekiso ophelele weNdaba kaGiovani Lo Celso yobuntwana, i-Biography, amaqiniso womndeni, abazali, impilo yakuqala, kanye neminye imicimbi ephambili kusukela ngesikhathi ayengumuntu CHA ukuze abe nini adumile.
Impilo nokuvuka kukaGiovani Lo Celso. Ama-Credits Wezithombe: Instagram.
Yebo, wonke umuntu uyazi ukuthi ungubani unethalente kakhulu umdlali wasemuva osephenduke owokuguqula umdlalo weSpurs ngaphansi Jose Mourinho. Kodwa-ke, bambalwa kuphela ababheka inguqulo yethu yeGiovani Lo Celso's Biography ethakazelisa impela. Manje ngaphandle kokuqhubeka, ake siqale.
Amaqiniso we-Giovani Lo Celso Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Isizinda Somndeni Nokuphila Kwasekuqaleni
Midfield jikelele Giovani Lo Celso wazalwa ngosuku lwe-9 ku-Ephreli 1996 edolobheni laseRosario e-Argentina. Ungowesithathu ezinganeni ezine azalwa ngunina, uSandra nakuyise, uJuan Lo Celso.
UGiovani Lo Celso wazalwa abazali abazali abaziwa kangako. Ama-Credits Wezithombe: I-Instagram ne-PxHere.
Uyazi ukuthi uGiovani uyisizwe sase-Argentina sobuzwe obuxubile nemvelaphi yomndeni wase-Italy? Wakhulela endaweni yaseSarmiento eRosario lapho ayenengane egcwele ubumnandi ekhula eceleni komfowabo omncane - uFrancesco kanye nodadewabo ababili abadala uLuciana no-Agustina.
UGiovani omncane wayenengane egcwaliswe ubumnandi ekhula eceleni komfowabo omncane uFrancesco nabanye ababili. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Ukukhulela emndenini osezingeni eliphakathi nendawo endaweni yaseSarmiento, bekuyinto engenakwenzeka ukuthi uGiovani angabi umdlandla webhola. Indlu ayehlala kuyo uGiovani yayiseduze nje nokuvinjwa kwebhola. Futhi yayinegaraji elikhulu ngokwanele ukuthi uGiovani angaziphatha ngebhola nomfowabo omncane uFrancesco.
Amaqiniso we-Giovani Lo Celso Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - I-Education ne-Career Buildup
Njengabaphathi abaningi bomsuka, uGiovani uthathe izinyathelo zakhe zokuqala emqhudelwaneni webhola eziklabhini zabafana bendawo ngaphambi kokufikelwa yisifiso sokuthi yiliphi ikilabhu neligi ukuqala umsebenzi wakhe wobusha.
Amakilabhu wabafana afaka iSan Jose, iklabhu yasendaweni lapho umsebenzi kaGiovani waqala khona ngokuzikhandla ngaphambi kokujoyina i-Argentina edumile yase-Atlética Jorge Griffa academic ukuyoqeqeshwa iminyaka emibili.
Udlale amakilabhu wabafana ngesikhathi seminyaka yobudala. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Amaqiniso we-Giovani Lo Celso Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Okuqala Kwomsebenzi
Ngesikhathi uGiovani esekulungele ukuqala umsebenzi wakhe wobusha, wayesenikele ngokuqhamuka emaqenjini aphezulu kufaka phakathi uhlangothi lwesiNgisi - i-Everton. Kodwa-ke, owayeneminyaka engu-15 ngaleso sikhathi wazibophezela eklabhu yasekhaya iRosario Central ukufezekisa iphupho lakhe lobuntwana.
Ukudlalela iRosario Central kwakuyiphupho abambelela kulo iminyaka futhi abheke phambili ekufezekiseni. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Ngenkathi eseRosario Central, uGiovani wakhula ngobuciko futhi wavuthwa njengoba ekhuphuka emabangeni ekilabhu. Eqinisweni, uhlangothi lwaseFrance i-PSG lwalunamehlo kuGiovani izinyanga futhi lwaqhubeka nokusayina amathemba ebhola ngemuva kokuqeda isizini yakhe yokuqala yesizini (ka-2015/2016) yeRosario Central.
Amaqiniso we-Giovani Lo Celso Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Umlando Wendlela Yokudumisa
UGiovani akazange aqale ukuyidlalela i-PSG ngemuva nje kokumsayina. Ubuye abolekwe kuRosario Central ukuthola isipiliyoni seqembu lokuqala ngesizini ka-2016/2017. Ekuqedeni isivumelwano sakhe semalimboleko, lo mdlali wasesiswini waya kuPSG futhi waba nesipiliyoni sokudlala eceleni kokuthandwa kwe Dani Alves, Adrien Rabiot, Draxler futhi Cavani ngesizini ka-2018/2019.
Lapho eqeda isivumelwano sakhe semalimboleko, lo mdlali wasesiswini wakhuphuka eRosario Central futhi wenyukela phezulu. Ama-Credits Wezithombe: Instagram.
Kuyasiza ukwazi ukuthi i-PSG yayingenandawo unomphela yeGiovani. Ngenxa yalokho, babengenankinga yokubolekelwa nguye ohlangothini lwaseSpain i-Real Betis inketho yokuthenga. KwakuseReal Betis ngaphansi Quique Setien ukuthi uGiovani uthole ifomu futhi wanquma ukwenza isivumelwano sakhe ngokuphelele neqembu ngezizathu ezisobala (isikhathi esengeziwe somdlalo).
Amaqiniso we-Giovani Lo Celso Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphakama Ukudumisa Indaba
Ekuphakameni kokusebenza kwakhe neReal Betis, uGiovani wazakhela idumela lomshini wokushaya amagoli ngokushaywa kobuhlungu, intuthuko ehola uhlangothi lwaseNgilani iTottenham Hotspur ukuyomsayina kwimalimboleko yakhe yesizini. Kodwa-ke, lo mdlali waseArgentina wazabalaza ekilabhini, akabongi ngenxa yokulimala kwe-hip akhetha ngenkathi esemsebenzini wamazwe omhlaba. UGiovani owayenethemba wayesazama ukuthola indawo ekilabhini lapho umuntu wakuleli Mauricio Pochettino yathathelwa indawo Jose Mourinho.
Engakhungathekile, uGiovani wasebenza ukuthola umusa emehlweni wemenenja yakhe entsha ngokuvula amaphuzu lapho iTottenham yanqoba ngo 4-0 iRed Star Belgrade ku-UEFA Champions League. Akubanga isikhathi eside ngaphambi kokuthi aqinise isikhundla sakhe njengomdlali wasesiswini omangalisayo ngokushaya igoli lokuvula ngo 2-1 behlula iMiddlesbrough ku-FA Cup.
Udumo lwamgona ngemuva kokunikela ngezinhloso ezibalulekile ezenze waqina isikhundla sakhe njengomunye wabagadli abanamandla beSpurs. Isikweletu Sezithombe: I-TheTelegraph.
Kuyindaba yesikhathi kuphela ngaphambi kokuthi simbone yena nabalingani esikanye naye enkundleni yemidlalo, Harry Winks, Tanguy Ndombele, Susa Alli futhi UGedson Fernandes hambisa ama-Spurs aye ezingeni elikhulu elilandelayo. Abanye, njengoba besho, umlando.
Amaqiniso we-Giovani Lo Celso Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Imininingwane Yokuphila Ubudlelwane
Kude nempilo yakhe kaDiovani Lo Celso ebabazekayo, unempilo emangazayo yothando eyenziwe yathandeka yintombi yakhe uMagui Alcacer. Akayona nje intombi kaGiovani kodwa oyisibonelo sokubhukuda, owokuzivocavoca umzimba kanye nesazi se-kinesiologist.
Ngomphrofayili omangalisa kangaka, akumangazi ukuthi uGiovani uthanda futhi uyayazisa intombi yakhe ahlangana nayo eminyakeni eminingi edlule eRosario. Ubudlelwano bukaGiovani noMagayi abunikanga ukuthi kuzalwe noma iyiphi ingane - ngaleso sikhathi sokubhalwa - kanti nezintombi ezinothando azinawo amadodana (amadodakazi) noma amadodakazi akhe ngaphandle komshado.
Hlangana noGiovani Lo Celso Intombi Yomfazi uMagui Alcacer. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Amaqiniso we-Giovani Lo Celso Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso Okuphila Komndeni
Ukuqhubekela phambili empilweni yomndeni kaGiovani Lo Celso, ubusisekile ngokuba nabazali abasekelayo kanye nabafowabo. Sikulethela amaqiniso ngamalungu omndeni kaGiovani aqala nabazali bakhe.
Mayelana nobaba nonina kaGiovani Lo Celso: UJuan Lo Celso noSandra bangumama nobaba womdlali ophakathi nendawo ngokulandelana. Amagalelo abo amakhulu entuthuko nenqubekela phambili kaGiovani uhlala emusha kwinkumbulo yakhe. Njengoba kunje, umphathi wenkundla yaphakathi nonyaka uhlala eshesha ukukhokha ubaba wakhe ngokumyisa ekuqeqesheni. Futhi akakukhohlwa ukuthi umama wakhe wayehlala emkhuza ukuthi azithobe futhi ahlale egxile ebholeni. Abazali bakaGiovani basahlanganyela ubuhlobo obusondelene naye - ngaleso sikhathi sokubhala - futhi balwela ukuqinisekisa ukuthi uthola okungcono kakhulu empilweni.
Mayelana nezingane zakubo kaGiovani Lo Celso: Njengoba sishilo phambilini, uGiovani Lo Celso uyingane yesithathu ezalwa abazali bayo. Unodadewethu abancane abathathu abaziwayo abaziwa njengoLuciana no-Agustina kanye nomfowethu omncane - uFrancesco odlala njengomdlali wasesiswini weRosario Central ngesikhathi sokubhala. Zonke izingane zakwethu ezine zazinempilo enhle kakhulu egcwaliswa ngaphambi kokukhula ndawonye. Bayathandana futhi bayasekelana. Abazali bakaGiovani Lo Celso bazala izingane ezilandelayo.
Ku-LR: UFrancesco, uGiovani, uLuciana, u-Agustina noGiovani futhi. Ama-Credits Wezithombe: Instagram.
Mayelana nezihlobo zikaGiovani Lo Celso: Ukuqhubekela phambili empilweni yomndeni owandisiwe kaGiovani Lo Celso, akukho marekhodi wobukhokho bakhe nezimpande zomndeni wakhe, ikakhulukazi umkhulu nogogo wakhe kanye nomkhulu nogogo wakhe ongumama. Ngokufanayo, omalume bakaGiovani, abomalume kanye nabazala abaziwa kakhulu ngenkathi umshana wakhe nomshana wakhe usazokhonjwa ngesikhathi kubhalwa lo mlando.
Amaqiniso we-Giovani Lo Celso Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso okuphila komuntu siqu
Ubani uGiovani Lo Celso?… Wake wazibuza yini ukuthi yini eyenza i-Giovani Lo Celso iteke? Uzame kangakanani ukuthola isiqu sobuntu bakhe obengekho? nansi indawo efanelekile yokudla iso lakho ematheksthini eveza amaqiniso nge-persona yomdlali wokudlala ukuze akusize uthole isithombe esiphelele ngaye.
Ukuqala, i-persona kaGiovani ikhombisa izici eziboniswa ngabantu abaqondiswa uphawu lwe-Aries Zodiac. Unesifiso sokuvelela, kulula, okomoya, onamandla futhi akanankinga nokuveza amaqiniso ngempilo yakhe yangasese neyangasese. Izintshisekelo nezinto zokuzilibazisa zeMidimeller kufaka ukubhukuda, ukuhamba nokuchitha isikhathi esihle nomndeni wakhe nabangane.
Isikhathi esihle nabangane kusho lukhulu kumdlali wasesiswini. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Amaqiniso we-Giovani Lo Celso Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ama-Lifestyle Facts
Mayelana nemizamo yokwenza imali kaGiovani Lo Celso nokwenza imali eningi, uhola kahle kakhulu emiholweni kanye nasemholweni wokudlala ibhola lezindiza ezihamba phambili ngenkathi izindondo zinomthelela ekukhuleni kwenani lakhe elisabhekwa ngesikhathi kubhalwa le bio.
Lo mdlali osemncane akazange abonwe eshayela izimoto ezingase ziqinisekise izinsolo ngokuphila kwakhe okunethezeka okuyihaba ngenkathi inani lendlu noma efulethini ahlala kulo lingaziwa. Kodwa-ke, unento yokuchitha amaholide ezindaweni zokungcebeleka ezibizayo kubandakanya iDisneyland Park.
UGiovani Lo Celso- Bona obonwe enesikhathi esihle eDisneyland Park. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Amaqiniso we-Giovani Lo Celso Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso angaziwa
Ukubhalwa kwendaba yethu yobuntwana kaGiovani Lo Celso kanye ne-biography yakhe, lapha kunamaqiniso amancane angaziwa noma angaziwa ngaye.
Mayelana nomgomo wokugubha kukaGiovani: like Bale & UGabriyeli uJesu, UGiovani ugubha imigomo yakhe ehlukile ngokuphakamisa isandla sakhe sokudla ngeminwe engu-5 eyeluliwe. Ngenkathi umdlali wasesiswini ekulo, uphakamisa isandla sakhe sobunxele ngomunwe oweluliweyo okhomba ngakwesokunene sakhe. Ngokusho kukaMidfielder, yonke iminwe eyisithupha eyeluliwe ikhokha wonke amalungu omndeni wakubo kubandakanya naye.
Akusikho ngaso sonke isikhathi lapho ubona umgubho wenhloso oyingqayizivele unencazelo eyisisekelo. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Mayelana Ubuzwe Base-Giovani base-Italy: I-Midfielder ifa elithandekayo lase-Italy. Ngakho-ke, yathola ukuba yisakhamuzi ezweni futhi inepasipoti yase-Itali eyayisebenza ngaleyo ndlela. Noma kunjalo, uGiovani nje UPapu Gomez ukhethe ukumela i-Argentina.
Isilinganiso se-Fifa: Uyazi ukuthi uGiovani Lo Celso's FIFA 20 Isilinganiso sama-83 se-89 sikhuluma kahle ngesibalo somsebenzi asibekele sona ekuthuthukiseni amakhono akhe selokhu aqala ukudlala ibhola lezindiza eziphezulu? Kuyamangaza ukuthi futhi une-Potential rating efinyelela ku-XNUMX. Akunakuphikwa ukuthi iqiniso lokuthi izilinganiso zizovele zingasebenzi ndawo kuphela!
Bheka amazinga ahlaba umxhwele futhi akhuphuka akhuluma kahle ngokuthuthuka kukaGiovani Lo Celso ebholeni eliphezulu. Isikweletu Sezithombe: I-Youtube.
Ukubhema nokuphuza: UGiovani Lo Celso akanikezwa ukubhema ngesikhathi sokubhala le bio. Kodwa-ke, uphuza ngokunenhlonipho nabalingani beqembu, umndeni nabangane ngezikhathi ezikhethekile.
I-tattoo: Umdlali wasesiswini - ophakeme ngamamitha ama-5, amayintshi ayi-10 - udlala kwiligi engaphansi yabadlali abancane abangenawo ama-tattoos ngesikhathi sokubhala. Ngaphandle kwalokho, angahle ahlanganise amasu wokuthola ubuciko bomzimba ngokuzayo lapho ezizinikezela njengomunye wezwe eliyi-bests.
Wake wambona omunye we-Giovani Lo Celso tattoo?… Sazise ebhokisini lokuphawula. Isikweletu Sezithombe: I-Instagram.
Inkolo: Abazali bakaGiovani Lo Celso bamkhulisa ngokulandela inkolo yobuKhrestu. Lokhu kubonakala emagameni atholwe ngunina uSandra nezingane zakubo - u-Augustina noFrancesco. Kodwa-ke, akukaziwa ukuthi uGiovani wenza ubuKristu yini ngoba akamkhulu enkolweni ezinkundleni zokuxhumana naphakathi nezingxoxo.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda i-Giovani Lo Celso yethu Yobuntwana Indaba Yezindaba Zasekhaya ye-Untold Biography. At LifeBogger, silwela ukunemba nokungakhethi. Uma uthola okuthile okungabukeki kulungile, sicela wabelane nathi ngokubeka amazwana ngezansi. Sizohlala sazisa futhi sihlonipha imibono yakho.
U-Victor Wanyama Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
Usuku olushintshiwe: Mashi 4, 2018
I-Roman Pavlyuchenko Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts